Guyyaa dubartootatti eegumsa fayyaatiif gabbisa hubannoo
Guyyaa dubartootatti eegumsa fayyaatiif gabbisa hubannoo Featured
Dubartootni hospitaalichatti qorataman wayita daawwataman (Suurri Dabalaa Taaddasaatiin)
Finfinnee: Aaddee Wayinasheet Mogas, qorannoo kaansarii duraa, kaansarii fiixee gadameessfi harmaa guyyaa dubartootaa addunyaa sababeeffachuun Roobii Hospitaalaa Xiqur Ambassaatti geggeeffamerratti, dubartootaa sakatta'amuuf dhufan keessaa isaan tokko. Akkasaan jedhanitti, dubartoonnii qorannoo duraa kaansarii taasisuun, salphaatti kaansarii ittisuun akka danda'amufi yeroon yoo wal'aansa argatan kan fayyuun danda'amuudha. Dubartoonni hedduun iccitii ofii dhokfachuuf jechaa qoratamuuf sodaa akka qabaniifi dursanii of beekuun hinmul'atu jedhan.
Aadde wayinasheet akka jedhanitti, hubannoon hawaasaa keessattu kan dubartootaa gahaa akka hintaaneefi namoonni muraasni yoo eegalan hunduu wal ilaalee qoratamuu akka danda'u himan. Isaanis dubartootaaf fakkeenya ta'uun qorannoo duraa akka geggeessan kakasuuf kan hojjetan ta'u dubbatan.
Akkaasumas Aadde Dureettii Taaddasaa, dubartootaa qoratamuuf hospitaalichatti argaman keessaa isaan biroodha. Akkasaan jedhanitti, dubartoonni carraa akkanaatti gargaaramuun yoo of beekan jijjiramni dhuunfaa dhufuu danda'a. Kanaaf dubartoota biroo fayyadamtoota taasisuuf kaka'umsa uumuu qabna.
Aaddee Dureettiin akka jedhanitti, hubannoon qorannoo kaansarii duraarratti jiru gaha miti. Wayita duulli akkanaa jiraatu sodaa uumamuu maluufi dhibichi miidhaa geessisuun yoo walbira madaalamu dursanii ittisuurratti sochiin jiru gaariidha. Hanqina jiru guutuuf ammoo guyyaa dubartootaa sababeeffachuun duulli geggeeffamaa jiru gumaacha olaana qaba jedhan.
Guyyaa dubartoota addunyaa sabbeeffachuudhaan Hopitaalaa Yaadannoo Maahatama Gaandiifi Xiquur Anbassaatti guyyuma kana daawwannaan geggeeffameera. Daawwannaa kanarratti Ministirri Dhimmi Dubartootaafi Daa’immanii Aadde Dammitu Hambisaa akka jedhanitti, haala kanaan duraa caalaa qorannoo duraa kaansariifi arjoomni dhiigaa kan geggeeffamu ta’u himan.
Guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan hubannoo dubartootaa gabbisuun fayyaasaniitiif akka tattaafatan gochuuf kan kaayyeffate ta'uu himaniiru. Sagantichi kan jalqabaa utuu hintaane ittifufiinsaan kan hojjetamu ta’uu ibsanii, dubartoonni gara dhaabbilee fayyaa deemuun sakatta'aa kaansarii fiixee gadameessaafi harmaa akka taasisan hubachiisaniiru.
Hubannoo hawaasaa gabbisuudhaan kaka’umsi uumamee qorannoo duraa kaansarii yoo taasisaniifi ofiisaanii yoo beekan kaansariin dhibee fayyamuun danda’amuu jedhanii, haadholiin yeroo yeroodhaan qoratamuu akka qaban dhaamaniiru.
Kanumaan walqabee haadholiin da’umsaarratti, kanneen biroon ammoo balaa garagaraatiin dhiigni kan itti hir’atu waan ta’eef, kutaan hawaasaa hunduu guyyaa dubartootaa kana sababeeffachuudhaan arjooma dhiiga akka taasisan gaafataniiru.
Ministir Deetaan Ministeera Eegumsa Fayyaa Doktar Kabbadaa Warquu gamasaaniitiin, guyyichatti ittisaafi to'annoo kaansarii ilaalchisee qorannoo kaansarii duraa, kaansarii harmaafi fiixee gadameessaa taasisuun hubannoo hawaasaa cimsuuf akka ta'e himaniiru. Baay’inni namoota taajilichatti maayii ba’anii fooyya’aa akka jiru eeranii, hubannoon hawaasa ammayyu fooyya’uu qaba jedhan.
Akka biyyaalessaatti qorannoon duraa kaansarii, dhaabbilee fayyaa 200 ol ta’anitti kennamaa akka jiru kan himan Doktar Kabbadaan, hubannoon hawaasaa ammayyuu gadaanaa waan ta’eef, kanneen tajaajila qorannoo duraatti dhimmi ba’an ammayyu muraasaa jedhan. Akka karoora qabameetti giddugalli tokko aanaa tokkotti akka jiraatu taasisuuf yaadamullee waliing’iinsisaa gadaanaadha jedhaniiru.
Guyyaan dubartootaa addunyaa akka addunyaatti yeroo 107ffaaf, akka biyyaatti ammoo 42ffaan kalessaa kabajameera.
Torban kana/This_Week 10594
Torban darbe/This_Month 96951
Guyyaa mara/All_Days 1435374